खनाल-नेपाल समूहद्वारा काठमाडौँमा समानान्तर कमिटी घोषणा — Sanchar Kendra
१कोरोना संक्रमणबाट सयौंले ज्यान गुमाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले दिए यस्तो लज्जास्पद अभिव्यक्ति
२ओली-नेपाल समूहबीच सिंहदरबारमा वार्ता जारी, काे-को छन् सहभागी ? यी हुन् छलफलका तीन एजेण्डा
३ओली र नेपालबीच सिंहदरबारमा वार्ता सुरु, अरु को को छन् सहभागी ?
४कोरोना संक्रमणबाट एकैदिन २०३ जनाको मृत्यु
५ओली र नेपालबीच सिंहदरबारमा वार्ता हुँदै
६पछिल्लो २४ घण्टामा थप ८ हजार ५२० जनामा संक्रमण पुष्टि
७ओलीसँग चपलीहाइटमा भएको थियो यस्तो गोप्य सहमति, माधव नेपाल आफैले गरे सनसनीपूर्ण खुलासा
८सपथ लिएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले दिए यस्तो प्रतिक्रिया, कसलाई के भने ?
९मकवानपुरमा थप १ सय ९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, पर्सामा पनि बढ्दै
१०सपथ लिँदालिँदै जब प्रधानमन्त्रीको मुखबाट राष्ट्रपतिसामु चिप्लियो यस्तो शब्द, त्यसपछि जे भयो…
११रुपन्देहीमा थप दुई जना संक्रमितको मृत्यु, गण्डकीमा संकट झन् बढ्दै
१२विवाहभोज खाएपछि कोरोना संक्रमण, एकै घरका ३ जनाको मृत्यु
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहले काठमाडौंमा समानान्तर कमिटी घोषणा गरेको छ। आइतबार बुद्धनगरस्थित एक पार्टी प्यालेसमा भएको कार्यक्रमबाट बसन्त मानन्धरको नेतृत्वमा उक्त समूहले जिल्ला कमिटी घोषणा गरेको हो।
मानन्धर बागमती प्रदेश सभाका सांसद हुन्। आजको कार्यक्रममा नेताद्वय खनाल र नेपाल पनि उपस्थित थिए। एमालेको काठमाडौं जिल्ला अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली समूहका कृष्ण राई छन्।
पछिल्लो समय समय ओलीले नेता नेपाल र अन्य नेताहरूलाई पार्टीबाट निलम्बन गरेपछि खनाल-नेपाल समूहले समानान्तर कमिटी बनाउन सुरू गरेको हो। यसअघि उक्त समूहले विभिन्न जिल्ला र भातृ संगठनहरूमा समानान्तर कमिटी गठन गरिसकेको छ।
नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि केपी ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई लात्ताले हानेर फालेको बताएका छ्न ।
काठमाडौं जिल्लाको समानान्तर कमिटी गठन गर्न आयोजित भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेपालले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्न ओलीले प्रचण्डको चाकरी समेत गरेको आरोप लगाए । ओलीले आफूलाई प्रचण्डको मामूलि कार्यकर्ता भनेकोमा पनि नेता नेपालले आक्रोश पोखे ।
के हिजो प्रचण्डको कार्यकर्ता थिए ओली ? आफू पदमा पुग्न चाकरी गरेको होइन ? स्वार्थ पूरा भएपछि प्रचण्डलाई लात्तीको किक हानेर फाल्ने व्यक्तिलाई अध्यक्षको रुपमा टाउकोमा राख्न अभिशप्त भएका छौं ।
२०७३ सालमा पनि प्रचण्डलाई धोखा दिएर प्रधानमन्त्री बन्न नदिएपछि एमाले सरकारबाटै बाहिर जानुपरेको नेपालले बताए । केपी ओलीले पार्टीलाई थाहै नदिई संसद भंग गरेको आरोप समेत लगाए ।
नेता नेपालले नेता वामदेव गौतमलाई सहकार्यको लागि प्रस्ताव गरे । ‘बालुवाटारमा बालुवा पेलेर केहि निस्कने वाला छैन, अस्ति फेरि वामदेव कमरेडलाई भनेको छु आउनुस् हातमा हात मिलाएर अघि बढौं ।’ उनले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सहमतिको प्रयास गर्नुको कुनै अर्थ नभएको बताए ।
यस्तै नेपालले आफूहरु केपी ओलीले फालेर नफालिने नेता रहेको दाबी गरेका छन् । आज काठमाडौँ जिल्ला कमिटी घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले ओ‌लीसँग मिल्ने कुनै अवस्था नरहेको पनि दाबी गरे । नेकपा एमालेभित्र समानान्तर गतिविधि गर्न थालेपछि निलम्बनमा परेका नेता नेपालले आफ्नो मूल पार्टी नेकपा एमाले नै रहेको बताए ।
उनले भने, ‘कानुनले नदिए विकल्प खोजौँला। विचार मिल्छ। मूल पार्टी यही हो । केपी ओलीले पार्टी नै कब्जा गरे भने छुट्टै कुरा हो।’ उनले एमालेका आफूभन्दा तलका सबै नेता तथा कार्यकर्ता पार्टी अध्यक्ष विरुद्ध चर्कोरुपमा उत्रिरहेको पनि बताए।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीलाई प्रश्न गर्दै नेता नेपालले भने, ‘केपी ओलीले फालेर फालिने मान्छे हौँ ? केपी ओलीले ल्याएर आएका हौँ ? कसैले प्रधानमन्त्रीको फूर्ती लगाउँछ भने त्यसको कुनै काम छैन।’
नेता नेपालले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि आफ्नो पक्षमा आउन लागेको बताएका छन् ।उनले भने, ‘पदाधिकारी, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय कमिटीमा पनि हामी बहुमतमा छौँ। वामदेव गौतम पनि हाम्रो पक्षमा आउँदै हुनुहुन्छ।’
उनले आफैँ लागेर पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याएको दाबी गरे । उनले भने, ‘पार्टीलाई हामीले यहाँसम्म ल्याएका हौँ। कसैले प्रधानमन्त्रीको फुर्ती लगाउन भने, नवौँ महाधिवेशनमा जालझेल गरेर जितेको फुर्ति लगाउन भने त्यसको अर्थ छैन। संगठनको हिसाबले पनि हामीहरू कमजोर छैनौँ ।’
नेता नेपालले पार्टीभित्र केपी ओलीले गुटबन्दी गरेका कारण अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको टिप्पणी गरे । उनले पार्टी विधि पद्धति र सिद्धान्तको आधारमा चल्नुपर्ने पनि बताए। ‘कामको सही मूल्यांकन गरेर सबैलाई समान व्यवहारले गर्नुपर्छ। कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्न मिल्दैन’ उनले भने।